Puzzles 🥇 Midira ary mankafiza amin'ny Emulator.online
Fanamarihana: ny filalaovana ny kinova finday dia ahodino ny efijery
Puzzles Etsy ambany dia hasehonay anao ny zavatra rehetra ilainao hahafantarana ity lalao tsara tarehy ity. Avy amin'ny dikany etymolojika, ny niandohany, ny tombony azony, ny karazana piozila misy ary koa ny paikady hamahana azy haingana kokoa.
Puzzles: Ahoana no filalaovana tsikelikely 😀
Manao a Puzzle an-tserasera maimaim-poana, mila fotsiny ianao araho tsikelikely ireto torolalana ireto:
Dingana 2. Raha vantany vao miditra amin'ny tranokala ianao dia efa hiseho eo amin'ny efijery ny lalao. Ianao ihany no mila hilalao kilalao ary afaka manomboka misafidy ny piozila tianao indrindra ianao. Azonao atao ny misafidy ny sary izay tianao indrindra, ary aorian'ny fisafidianana azyAzonao atao ihany koa ny misafidy ny isan'ny sombin-javatra hananan'ny piozila.
Dingana 4. Atambaro miaraka daholo ireo sombin-javatra amin'ny fomba namoronana ilay sary nofidinao.
Dingana 5. Rehefa vita ny lalao iray dia kitiho "Haverina velomina" hanao ankamantatra hafa.
Inona no atao hoe piozila? 🧩
Un Ve?Izany dia lalao noforonina tamin'ny sombin-javatra maro sy samihafa izay tsy maintsy ampifandraisina mba hamorona iray manontolo, amin'ny ankapobeny ny sary, ny sarintany na ny sary. Lalao efa taloha be io. Tsy isalasalana, iray amin'ireo fialamboly tsara indrindra ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe. Ankoatra izany, manampy amin'ny fampivoarana andian-tombony azo avy amin'ny psychomotor.
Fa na iza na iza mihevitra ny ankamantatra dia noforonina vao haingana dia diso. Araka ny nolazaiko dia efa antitra izy. Ary, voalohany, ny noforoniny dia ho an'ny tanjona hafa.
Ny niandohan'ny piozila ☝️
Na dia mbola tsy mbola afaka milaza aza ny mpahay tantara rehefa niseho ny piozila dia misy ny teôria momba ny niandohany.
Ny iray amin'ireo ekena indrindra dia ilay mpaka sary anglisy, John Spilsbury, namorona ny lalao. Mba hahafahan'ny mpianany mianatra jeografia, tamin'ny taona 1760 i John dia namorona andian-dahatsoratra niaraka tamin'ny faritra eran'izao tontolo izao. Niara-namorona ny sarintanin'izao tontolo izao izy ireo. Mampiasa tabilao hazo sy stilettos, Spilsbury nanome ny mpianany fahafinaretana sy fianarana.
fa ny sasany milaza fa ny ankamantatra dia noforonin'ny sinoa. Tangram Kilalao taloha tany Sina izy io. Fito monja no misy azy, saingy mamela ny famoronana sary maromaro izy ireo. Saingy, tsy mitovy amin'ny an'ny ankamantatra mahazatra antsika io.
Raha ny marina, taorian'ny namoronana an'i Spilsbury dia nanjary nalaza be ilay piozila. Izany hoe vita tanana izy ireo, ka lafo be. I irery tao amin'ny Revolution Revolution (1760-1820 / 1840) izay nanjary mora vidy kokoa ilay ankamantatra. Izany dia satria fandrosoana ara-teknolojian'ny Revolisiona Nanolotra ny fitaovana ilaina izy ireo mba hahatonga ny kilalao ho haingana sy ho mora vidy kokoa.
Nandritra ny Great Depression (1929), ny kilalao dia niaina firoboroboan'ny famokarana. Nisy aza ny fanofana piozila 10 cents isan'ora! Ambonin'ny zava-drehetra, nitady fahafaham-po sy fahafaham-po ny olona rehefa nilalao ilay kilalao.
Fiandohan'ny teny Puzzle
Ny teny piozila (piozila amin'ny espaniola) dia fantatra sy ampiasaina eran'izao tontolo izao. Ny niandohany dia anglisy. Ny faka etymolojika dia avy amin'ny latina, avy amin'ny matoanteny latin hapetrako (midika izany miakanjo).
Ahoana ny fomba fanaovana ankamantatra: Torohevitra
Safidio ny piozila mety indrindra
Ny famantarana ny taona amin'ny fonosana dia manampy, fa tsy tokony hampiasaina ho mari-pahaizana mitoka-monina. Diniho koa ny fahalalan'ny zanakao amin'ity lalao ity. Raha tsy manana traikefa teo aloha ilay zaza dia omeo safidy ireo maodely misy faritra kely kokoa, mandra-pahazatra azy.
Manana tontolo mety amin'ny fametrahana azy
Vantany vao novidiana ny ankamantatra dia tena ilaina izany misafidiana fanaingoana mety amin'ny fivorian'ny. kokoa, tokony hangina ny toerana, izay tsy misy olona mikoriana be.
Tsarovy fa ity hetsika ity dia mitaky fifantohana betsaka ary mety hanelingelina ny tabataba na ny fihetsika be loatra. Miaraka amin'izany ao an-tsaina, mendrika ny misafidy zoron'ny efitrano na efitrano hafa misy latabatra lehibe.
Ary koa, tena zava-dehibe ny fifehezana ny fihetsem-po fa tsy ny fanaparitahana ireo sombin-javatra vantany vao tonga any an-trano ianao, satria mety very izy ireo, ary hiafara amin'ny famoizam-po. Alao an-tsaina, aorian'ny andro fitokanana dia ho hitanao fa tsy feno ny sary.
Mampiasà modely ho toy ny mpitari-dalana
Ny fampiasana torolàlana ho fanovozan-kevitra dia sosokevitra iray izay tsy azo odian-tsy hita. Amin'ny ankabeazan'ny fotoana, ny kilalao mihitsy no mitondra ny famokarana ny sary hangonina.
Tazomy mba ho azon'ny olona rehetra manampy amin'ny fizotry ny fivoriambe ity maodely ity, mba hahafahan'izy ireo mijery azy rehefa manana fanontaniana izy ireo. Amin'izay, ny fiheverana amin'ny antsipiriany dia mety hahatonga ny fahasamihafana sy ny famitana ny hafainganana.
Atombohy amin'ireo sombin-joro
Ny tendronay farany dia mikasika ny famaritana ny paikadin'ny fivoriambe tsara indrindra. Amin'ity lafiny ity, asaina manomboka amin'ny zoro, izay misy sisiny mahitsy ireo sombiny. Amin'ity fomba ity, azonao atao ny manamboatra ny halehiben'ny sary.
Raha be dia be ny isan'ny sombintsombiny, ny lehibe indrindra eto an-tany dia miaraka mampitolagaga Sombiny 40 arivo , ny fivorian'ny sakana dia mety ho safidy tsara indrindra, indrindra raha misy ankizy mandray anjara. Ny tsirairay amin'izy ireo dia afaka mandray andraikitra amin'ny sombin-javatra kely ary avy eo ny olon-dehibe iray dia mandray andraikitra amin'ny fametahana azy ireo.
Saika manakaiky ny farany dia manome torolàlana iray hafa izahay: ny fanerena ny mety ho eo anelanelan'ny sombin-javatra dia fihetsika tsy ilaina. Rehefa tsapanao fa tsy mifameno izy ireo dia mitadiava vahaolana hafa mba tsy hanimba azy ireo.
Tombony azo amin'ny filalaovana piozila😀
Azo antoka fa efa naheno momba ny tombony amin'ny piozila. Ny fomba manentana ny ati-doha amin'ity karazana lalao ity ary miafara amin'ny famoahana tombontsoa maro ho an'ny olona tsy mitovy taona aminy.
Ny fanangonana ireo sombintsombiny kely ary afaka mamorona tontonana amin'ny farany dia a fanatanjahan-tena kognitive tena tsara ho an'ireo be antitra, olon-dehibe, tanora ary ankizy, indrindra ireo izay eo amin'ny sehatry ny fanabeazana.
Amin'ny ankapobeny, ny piozila dia tsara ho fahatsiarovana ary rehefa ampiharina any an-tsekoly, indrindra amin'ny fanabeazana ny zaza mbola kely, dia manamora tokoa ny fianarana. Te hahafantatra bebe kokoa momba ny tombony azo amin'ny fampiasana an'ity fitaovana ity any am-pianarana ianao, inona ny fitsipiny na inona ny tombony omeny an'ireo olona te-hanisy piozila? Mamaky hatrany.
1- Ny piozila dia mandrisika ny ati-doha
Ny fandraisana anjara lehibe voalohany amin'ny ankamantatra dia eo amin'ny sehatra ara-tsaina, satria ny piozila dia mandrisika ny ati-doha. Noho izany, ny fampiroboroboana fahaiza-manao tombony lehibe izany.
Ny hetsika dia misy fiatraikany mivantana amin'ny fahafahan'ny zaza mamaha olana, mitombo ny fisainana ary manatsara ny fahaizanao. Ny fahalalana ny isa, ny loko, ny endrika, ny sarintany, ny habaka, ny fivezivezena ary ny sehatry ny fahalalana maro hafa dia azo ampirisihina.
2- Ny piozila dia tsara ho fahatsiarovana
Lafiny iray hafa mifandraika amin'ny fampiasana ny piozila ny hoe tsara ho azy fahatsiarovana . Ity fandraisana anjara ity dia zava-dehibe amin'ny olona manana olana mifandraika amin'ny fanadinoana.
Izany no mitranga, noho izany, ny fitadiavana ireo sombin-javatra mety ho an'ny tsirairay dia mahatonga ilay olona hanangona vaovao momba ny endrika sy ny mety ho tsiroaroa. Azonao an-tsaina ve ny mampiditra an'ity hetsika ity ho an'ny olon-dehibe manana olana amin'ny fitadidiana?
3- Ny piozila dia mandrindra ny fandrindrana ny maotera
Misy ny vanim-potoanan'ny fahazazana izay ilain'ny ankizy kely hampivelatra ny fahaizany moto. Ny sandriny sy ny rantsantanany dia mbola tsy mahalala ny halavirana sy ny fanodinkodinana zavatra.
Noho izany, ny piozila kendrena amin'ity mpihaino ity dia mazàna mandrisika ny fandrindrana ny maotera na dia eo amin'ny fahazaza aza . Ny fiezahana mampifanaraka sombin-javatra kely amin'ny iray hafa dia fandrisihana lehibe hifehezana ny fihetsiky ny tanana, maso ary tanana.
Na izany aza, ny piozila dia tokony ampifanarahana amin'ny taona manokana ananan'ny zaza, miaraka amin'ny sombin-javatra lehibe kokoa sy maro loko ary fampidirana tena tsotra. Izy io koa dia mihatra amin'ny olon-dehibe na antitra izay manana olana amin'ny fandrindrana.
4- Ny piozila dia miteraka fifandraisana ara-tsosialy
Ny fotoam-pianarana dia dingana fampifanarahana ho an'ny ankizy. Ny famoronana namana sy ny famantarana ny vondrona ary ny fahatsapana ny fiaraha-monina dia tanjona lehibe ho an'ny ankizy mianatra.
Ary hahatratrarana an'io tanjona io, ny piozila dia fitaovana lehibe ifaneraserana . Mandritra ny lalao dia afaka mifanerasera, miara-miasa, mifaninana, mandresy, miady hevitra, mizara fahombiazana sy tsy fahombiazana amin'ny kilasy iray manontolo ny ankizy.
5- Mamporisika ny fahitana ny piozila
Ity lalao ity koa dia mamporisika ny fahatsapana ny ankizy mianatra. Ny fahaiza-mandinika, mampitaha, mamakafaka sy mamolavola hevitra dia fananana hiasa amin'ny fanabeazana ny zaza tsirairay .
Ireo tombony ireo dia mitatra amin'ny fahatanorana sy amin'ny maha olon-dehibe, toetra manandanja indrindra eo amin'ny sehatry ny asa. Ny fahitana ireo orinasa lehibe manararaotra eny an-tsena dia mety hateraka amin'ny fahazazana, miaraka amin'ny fanentanana mety.
Eny an-tsena, ny piozila dia manana kinova maromaro. Ary tsara ny mahatadidy fa afaka manana refy isan-karazany izy ireo fa tsy ireo izay miorina amin'ny sehatra mahitsy sy amin'ny lafiny iray ihany.
Ny karazana ankamantatra mahazatra indrindra dia: Bedlam's Cube, Magic Cube, Sum Cube, Pentaminos ary Tangram. Jereo ny antsipiriany misimisy momba ireo maodelin'ny Puzzles ireo:
Ity lalao ity dia misy Sombin-javatra 13 izay mahaforona goba tonga lafatra.Piozila noforonin'i Bruce Bedlam izy io. Raha atotaly dia misy sombin-javatra telo ambin'ny folo vita amin'ny cubes. Ny tanjona dia ny fanangonana boaty 4 x 4 x 4 ary hamorona fahaiza-mamorona, satria ny fanamby dia ny fitadiavana ny iray amin'ireo fomba maherin'ny 19 arivo hanatanterahana izany.
Ity kinova ity no malaza indrindra amin'ireo ankamantatra amin'ny endrika 3D.
Ny goba mazika dia olom-pantatray taloha. Ny anarany ofisialy dia Rubik's Cube, anarana manome voninahitra ny mpamorona azy, Ernő Rubik avy any Hongria. Izy io dia noforonina tamin'ny 1974 ary teraka lehibe izy - nahazo ny loka tamin'ny taona izy. Ny taona 1980 no faratampon'ity ankamantatra ity, izay mbola miely mandraka ankehitriny.
Izy ireo dia cubes polyethylene izay miaraka mamorona goba.
Ity dia piozila hafa miendrika kubus hafa. Izy io dia noforonin'i Piet Hein, izay namorona azy taorian'ny nanatrehany kilasy mekanika kuantum. Mampiasa cubes polyethylene fito ny lalao izay manamboatra cubes 3 x 3 x 3. Ireo singa ireo dia mahaforona endrika fivorian'ny 240 mahery.
Ity ankamantatra ity dia manana efamira dimy nalamina tamin'ny fomba samy hafa. Raha atotaly dia misy endrika Pentaminó 12. Ity ankamantatra ity dia nanentana ny lalao informatika Tetris na Rampart. Ity lalao ity dia nanentana ny Tetris malaza.
El tangram Singa fito fotsiny izy io izay afaka mamorona tarehimarika mihoatra ny 5,000.
Izany no piozila na jigsaw nentim-paharazana kokoa, raha oharina amin'ny endrika varotra ankehitriny. Teraka tany Sina izy niaraka tamin'ny sombin-javatra fito ary niara-niteraka isa maromaro izy ireo. Ny encyclopedia dia milaza hatrany fa azo atao ny manangona tarehimarika mihoatra ny 5,000. Tsy misy isalasalana fa aingam-panahy ho an'ny lalao ankamantatra miaraka amina endrika malaza toy izany ankehitriny.
El piozila lehibe indrindra antsoina hoe "Keith Haring: fiverenana miverina indroa"Manana faritany 32,256 izy, mirefy 5.44mx 1.92m eo ho eo ary 17kg ny lanjany.
Ny fanontana ny sary hosodoko "Convergence"nataon'i Jackson Pollock dia raisina ho iray amin'ireo piozila sarotra indrindra atambatra.
Tamin'ny 1997, tany Però, nanafika ny trano fonenan'ny ambasadaoro japoney ny vondrona mpiady anaty akata Movimento Revolucionario Tupac Amaru, niaraka tamin'ny takalon'aina maherin'ny 72 ary sosotra tamin'ny fifampidinihana, nangataka Piozila 2,000. Natao izany mba hananana fialamboly ireo takalon'aina fa tsy hovesaran'ny fifampiraharahana.
Tamin'ny 1933, ny ankamantatra nanomboka ho baoritra. Ambonin'ny zava-drehetra, nanamora ny vidiny izy io, ary niteraka fivarotana sahabo ho 10 tapitrisa isan-kerinandro aza!